हमाललाई मन्त्री बनाइएकोप्रति गगनको प्रश्न- इतिहासबाट शिक्षा नलिन अभिशप्त नै हो?
नेपाल लाइभ शनिबार, असोज २३, २०७८, १२:५९
काठमाडौं- सांसद् नरहेका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइएकोप्रति नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले आपत्ति जनाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री हमालको नाम उल्लेख नगरेर समाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले लोकतन्त्रमा शासकले निर्णय लिँदा वैधानिकताकाे कसीमा घोटेर मात्र नपुग्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न र जनताबाट अनुमोदित हुन सकेमात्र त्यसले वैधता पाउने थापाले उल्लेख गरेका छन्।
'हामी इतिहासबाट शिक्षा नलिन अभिशप्त नै हो? लोकतन्त्रमा शासकले निर्णय लिँदा वैधानिकताको कसीमा घोटेर मात्र पुग्दैन। त्यस्तो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न र जनताबाट अनुमोदित हुन सकेमात्र त्यसले वैधता पाउँछ। नत्र कानुनका छिद्रबाट छिराइएको निर्णयले अनन्तकालसम्म लखेट्छ भन्ने खै हेक्का राखेको?', थापाले लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। त्यसक्रममा उनले हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएका छन्।
हमाल कांग्रेसका पुराना नेता भएपनि उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको काेटाबाट मन्त्री बनाइएको भनेर आलोचना भइरहेको छ।
हामी इतिहासबाट शिक्षा नलिन अभिशप्त नै हो?लोकतन्त्रमा शासकले निर्णय लिँदा वैधानिकताको कसीमा घोटेरमात्र पुग्दैन।त्यस्तो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न र जनताबाट अनुमोदित हुन सकेमात्र त्यसले वैधता पाउँछ।नत्र कानूनका छिद्रबाट छिराइएको निर्णयले अनन्तकालसम्म लखेट्छ भन्ने खै हेक्का राखेको?
— Gagan Thapa (@thapagk) October 9, 2021